I-Featherstone Lodge Ikhaya Elimangalisayo Edamu LeVaal
Indlu enkulu ebekwe kahle ebheke Idamu leVaal. Inompheme omkhulu nomuzi owakhiwe ngegesi braai, ohlinzeka ngokubukwa okuhle kwedamu - indawo ekahle yokujabulela iziphuzo kanye ne-el fresco dining. Umdlalo wamahhala ohlukahlukene, ohlanganisa i-springbok, i-blesbok, i-willebeest, i-duiker nezinyamazane ezifuyiwe zizulazula phezu kwendawo.
Indlu inamakamelo okulala ama-4, amagumbi okugezela angu-3.5, indawo enkulu yokuhlala, indawo ephakeme ephezulu kanye nekhishi lesimanje eline-microwave nomshini wokuwasha izitsha. Kukhona indawo yokupaka eyanele.
Indlu iwumklamo wohlelo oluvulekile olunophahla oluphakeme olunikeza umuzwa wesikhala esingenamkhawulo. Zonke iziqephu ezesimanje. Indawo ephezulu ine-TV enkulu enedekhoda ethi "Open View" nendawo eningi yokuba wonke umndeni uhlale futhi ujabulele imuvi. I-Wifi engafakiwe iyatholakala ngaphandle kwezindleko ezengeziwe.
Kukhona ikhishi elihlome ngokuphelele elinesitofu segesi phezulu, ihhavini, umshini wokugeza izitsha, ihhavini ye-microwave kanye nefriji/ifriji. Kuhlinzekwa amabhodwe, amapani, izitsha nezinto zokusika. Indawo “iwukuziphekela ngokwakho” ngakho-ke sicela unikeze ukudla kwakho, iziphuzo ezishisayo nezibandayo kanye nezinongo.
Kunengadi ekhangayo enendawo enendawo eyihektare.
Itholakala ku-Eco Estate yangasese enempilo yasendle ezulazulayo yamahhala. Ilungele ukuhamba ngezinyawo, ukujikeleza noma ukugijima. Letha amabhayisikili akho asezintabeni nezicathulo zokugijima.
Ohlangothini oluthule lwedamu olunamanzi amancane, ngisho nangezimpelasonto nangamaholide. Kukhona indawo engenamkhawulo yokugibela isikebhe, ukushushuluza, i-wakeboard noma ukuhamba ngomkhumbi.
SLIPWAY KANYE JETTY.
Sine-slipway yangasese kanye ne-jetty - ngakho-ke letha isikebhe sakho kanye nama-jet skis.
Isevisi yansuku zonke iyatholakala ngemali eyengeziwe okufanele ikhokhwe ngokheshi kumsizi usuku ngalunye lapho eqeda imisebenzi yakhe yasekhaya.
Azikho izithuthi zomphakathi. I-Featherstone Lodge iqhele ngamakhilomitha ayisi-6 ukusuka edolobhaneni lase-Oranjeville lapho kunesiteshi senkonzo, ihhotela, izitolo, izitolo zotshwala, izindawo zokuphuza kanye nezindawo zokudlela. I-Deneysville iqhele ngamakhilomitha angaba ngu-25. IDeneysville iyidolobhana elikhulu kune-Oranjeville futhi inezindawo eziningi.
UKUFIKA KANYE NEZINKHIYE.
Ekufikeni kwakho uzohlangabezwa nguJoseph ozokuthatha uvakashele lendawo. Uzokwazi ukuphendula yonke imibuzo ongase ube nayo. Uma isikhathi sakho sokufika singemva kwamahora, okhiye bazoshiywa nesivikelo emnyango wefa, cishe ikhilomitha elingu-1 ukusuka e-Featherstone Lodge.
Ihlala emaphandleni ebheke Idamu leVaal.
Siyatholakala kumaselula ethu noma nini. Imininingwane yokuxhumana izonikezwa lapho kuqinisekiswa ukubhukha.